July 21, 2020 - Chothale
आखिर किन महिलाहरु परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्छन् ?
July 21, 2020 July 21, 2020 chothale
काठमान्डौँ । विवाहित जीवनमा मायाको साथसाथै शारीरिक सम्बन्धको आवश्यकता सबै महिला तथा पुरुषलाई हुने गर्दछन् । पुरुषहरु यौ’नसँग जोडिएको कुनै पनि कुरा आराम तथा ढुक्कसँगले आफ्ना श्रीमती तथा साथी भाइसँग खुलस्त रुपमा साटासाट गर्ने गर्दछन् । तर महिलाहरु यौ’नको मामिलामा कुरा तथा विश्लेषण गर्न लजाउने तथा हिच्किचाएको महशुस गर्दछन् । यसै कारण महिलाहरु यौ’नको चरम सुख तथा आनन्दको बारेमा केही पनि बोल्दैनन् । तर यौ’न एक यस्तो आगो हो जुन बलेपछि सरल रुपमा शान्त हुँदैन् । कतिपय महिलाहरु विभिन्न कारणले परपुरुषसँग यौ’न सम्बन्ध बनाउने गर्दछन् । श्रीमानको मायाको कमी ,…
राेचकरोचक कुराहरुLeaveacomment
राम जन्मेको भारतसँग प्रमाण छैन – तथ्य लिक भएकोमा भारत अचम्मित !
काठमाडौं । अयोध्या र भगवान् श्रीरामको जन्मस्थानका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ । यस बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको आलोचना तिब्र भएपनि यसमा खोज अनुसन्धान हुनुपर्ने बिज्ञहरुको भनाई छ । उनीहरुले रामको जन्मभूमि अयोध्यासँग जोडिएका ऐतिहासिक तथ्य संकलनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने बताएसँगै पुरातत्व बिभागले यसको अध्ययन थाल्ने निणर्यले निक्यौलमा पुर्‍याउने आशा र्सस्कृतिबिद्हरुको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार भगवान् राम भारतीय नभएको र असली अयोध्या वीरगञ्जदेखि पश्चिमको गाउँ ठोरीमा पर्ने दाबी गर्नुभएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले अयोध्या नेपालमै पर्छ भनेर दाबी गरेपछि सो बिषयमा भारतीय…
समाचारभगवान्, श्रीरामLeaveacomment
July 21, 2020 chothale
काठमान्डौं – लक्षमीको अर्को रूप हुन्छन यस्ता नारीहरू,जसले तपाईको घरलाई स्वर्ग बनाउछन नारी आफैमा एक अद्भूत शक्तिकी खानी हुन् । त्यसकारण नारीलाई माता दुर्गा, लक्ष्मी अर्थात सरस्वतीको रुपमा लिइन्छ । तर नारी भन्ने बित्तिकै नारीको देह भएर पुग्दैन् ।त्यसको लागि नारिको रुप, स्वभाव, प्रवृत्ति, चालचलन, सोच, विचार जस्ता अनेक कुराहरुलाई लिइन्छ । साच्चै भन्नुपर्दा नारी एक कोमल हृदयकी खानी हुन् । नारीमा एक प्रकारको सहृदयी भाव रहेको हुन्छ । यद्यपी धार्मीक शास्त्रले पनि नारी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरेको छ । हेरौँ एक असल नारीमा कस्तो कस्तो गुणहरु हुन्छन्…
मनोरन्जन, राेचक, समाचाररोचक कुराहरुLeaveacomment
नेपालमै राम जन्मिएको आधार भेटिन थालेपछि अ‌ात्तियो भारत !
काठमाडौं । भगवान श्रीराम नेपालमा नै जन्मनुभएको र अयोध्या पनि नेपालमै भएको तथ्य–प्रमाण जुट्न थालेपछि भारत अ‌ात्तिन थालेको छ । नेपालको पर्सास्थित ठोरी र माडीस्थित अयोध्‍यापुरीमा अयोध्याबारे प्रमाण जुट्न र स्थानीयले राम नेपालमै जन्मेका तथा अयोध्या नेपालमै रहेको भन्‍न थालेपछि भारत झस्किएको छ । भारतले ठोरीस्थित नेपाल सीमामा जंगे पिलर उखेलेको छ । त्यहाँ सुरक्षाकर्मी समेत बढाएको छ । भारतले नक्‍कली अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन तयारी थालेको छ । भगवान राम जन्मिएकै ठाउँमा राम मन्‍दिर बन्‍नुपर्छ भन्‍ने छैन । भगवान‍ रामका भक्त भएका विश्‍वका जुनसुकै ठाउँमा पनि राममन्दिर बनेका छन‍् । भारतले…
समाचारअयोध्या, भगवान श्रीरामLeaveacomment